Itholakale inhlwathi ebinyamalele eGoli | News24
Itholakale inhlwathi ebinyamalele eGoli
Lindiwe Mngomezulu, left, with her daughter Nolwandle Duma, lift up
Johannesburg - Inhlwathi enesisindo esingu-30kg, ibe nobude obungu-3.8 metres, negama layo nguBubbles, itholakale ihleli izisonge kahle ngasendlini yayo, ngemuva kokuthi inyamalale isikhathi esingaba wusuku.
UBubbles waduka esitolo sezilwane esisenxanatheleni yezitolo i-Oakfields Shopping Centre, eBenoni.
"Inyoka itholakale namuhla ekuseni (ngoLwesine). Umuntu osebenza esitolo uyithole ngaphakathi izisongile ihleli," kusho umniniyo uMark McGill, etshela abezindaba zeSapa.
UMcGill uthi abamazi ukuthi ubenyamalale waya kuphi uBubbles kanti kucingwe isitolo sonke, wangatholakala.
"Angimazi ukuthi ubekuphi, sisalinde ukuhlolwa kwamakhamera okungase kusibonise ukuthi kwenzekeni ngaye," kuchaza uMcGill.